थाहा खबर: आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत नबढ्ने
आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत नबढ्ने
काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि हुने बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकता विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धिदरमा प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी हुने बताए।
उनले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको बताए। आर्थिक सल्लाहकार उप्रेतीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फितिमा दबाब रहेको स्वीकार गर्दै यो समस्या चाँडै समाधान हुने दाबी समेत गरे।
उनले कोरोना महामारी पश्चात् बैंक तथा वितीय संस्थाहरूबाट उच्च कर्जा लगानी हुँदा पनि अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको बताए। मौद्रिक नीतिले १९ प्रतिशत कर्जा लगानी हुने अनुमान गरे पनि केही समय अगाडि ३८ प्रतिशतसम्म पुगेको बताए।
निर्यात भन्दापनि आयात एक्कासी रुपमा ह्वात्तै बढेकाले वाह्य क्षेत्रमा दबाब परेको उनको भनाई छ। आर्थिक सल्लाहकार उप्रेतीले चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने अनुमान भएपनि रुस र युक्रेनको युद्धका कारणले ७.१ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको उल्लेख गरे।
उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि, उत्पादन रोजगारीमा केन्द्रित हुने बताए। उनले बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलनमा ल्याउनको लागि भए पनि अबको बजेटमा कृषि, रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्र केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको बताए ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी)मा कृषिको योगदान १५ प्रतिशतमा आए मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुने दाबी गरे। उनले यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
डा.अधिकारीले सरकारले प्रतिस्थापन विद्येयक मार्फत् ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए। सरकारले जुन लक्ष्यका साथ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो त्यो लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको दाबी अधिकारीको छ।
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सहि दिशामा रहेको भने पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरु हेर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख नै रहेको अर्थविद् अधिकारीले बताए। अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनागत समस्या समाधानको लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनु पर्ने आवश्यक रहेको बताए।
अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरु नै काम गर्न लायक नभएको बताए। उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचना नै परिर्वतन गरेर नयाँ बनाउनु पर्ने बताए।
रोक्काले नेपालबाट निर्यात हुने उद्योगहरुको भ्यालु एडिसन हुनु पर्ने बताए। उनले त्यस्ता उद्योगमा सामान्य मानिसहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गरे मात्रै मुलुकको आर्थिक उन्नती हुने बताए । रोक्काले हामीले आर्थिक वृद्धिदरको हिसाव गर्न छाड्नु पर्ने बताए ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय सल्लाहकार डा. शालिकराम पोखरेलले विदेशबाट नेपाल आउने रेमिटेन्सको प्रभावले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए। उनले कोरोना महामारीको बीचमा अत्याधिक रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएकाले बजारमा तरलता सहजताका कारण उत्पादन भन्दा बाहिरका क्षेत्रमा लगानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए।
पोखरेलले तरलता सहज भएर अत्याधिक कर्जा आयातमा गएकाले अहिले बजारमा तरलता अभाव देखिएको बताए। उहाँले पछिल्लो समय राज्यमा आर्थिक नीति पनि आयातमुखी भएको बताए।
भारतीय सहयोगमा लोमान्थाङका दुई विद्यालयको स्तरोन्नति
यार्सागुम्बा खुला नगर्दै संकलन थालियाे
निजगढ विमानस्थल : निर्माणको पूर्वतयारीमै भयो १ अर्ब ११ करोड खर्च